Mapisarema 27 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Jehovha, nhare yeupenyu hwangu
Kukoshesa temberi yaMwari (4)
Jehovha ane hanya kunyange vabereki vakashaya hanya (10)
“Tarisira kuna Jehovha” (14)
Rwiyo rwaDhavhidhi. 27 Jehovha ndiye chiedza changu+ neruponeso rwangu. Ndingatya aniko?+ Jehovha ndiye nhare yeupenyu hwangu.+ Ndingadedereswa naaniko? 2 Vanhu vakaipa pavakandirwisa vachida kundibvambura-bvambura,+Mhandu dzangu nevavengi vangu ndivo vakagumburwa vakawa. 3 Kunyange uto rikadzika musasa kuti rindirwise,Mwoyo wangu hauzotyi.+ Kunyange ndikasangana nehondo,Ndichangoramba ndiine chivimbo. 4 Chinhu chimwe chete chandakakumbira Jehovha,Ndicho chandichatsvaga,Kuti ndigare mumba maJehovha mazuva ese eupenyu hwangu,+Kuti ndirambe ndakatarisa kufadza kwaJehovhaUye kuti nditarise temberi yake* ndichionga.*+ 5 Nekuti achandivanza munzvimbo yake yekuvanda pazuva redambudziko;+Achandiviga munzvimbo yakavanda yetende rake;+Achandikwidza pamusoro pedombo.+ 6 Saka musoro wangu wava pamusoro pevavengi vangu vakandikomba;Ndichapa zvibayiro patende rake ndichishevedzera nemufaro;Ndichaimba ndichirumbidza Jehovha.* 7 Ndinzweiwo Jehovha, pandinochema;+Ndinzwirei nyasha, mundipindure.+ 8 Ndichitaura ndichikumiririrai, mwoyo wangu wakati: “Tsvagai chiso changu.” Haiwa Jehovha, ndichatsvaga chiso chenyu.+ 9 Musandivanzira chiso chenyu.+ Musadzinga mushumiri wenyu makatsamwa. Ndimi mubatsiri wangu;+Musandirasa kana kundisiya, Mwari weruponeso rwangu. 10 Kunyange kana baba vangu naamai vangu vakandisiya,+Jehovha pachake achanditora.+ 11 Ndirayiridzeiwo munzira yenyu Jehovha,+Nditungamirirei mugwara rekururama nekuda kwevavengi vangu. 12 Musandiisa mumaoko emhandu dzangu,+Nekuti zvapupu zvenhema zviri kundipomera,+Uye zviri kundityisidzira zvichida kundirwisa. 13 Ndingadai ndiri kupi kudai ndisina kutendaKuti ndaizoona kunaka kwaJehovha munyika yevapenyu?*+ 14 Tarisira kuna Jehovha;+Shinga uye mwoyo wako ngausimbe.+ Tarisira kuna Jehovha.
^ Kana kuti “nzvimbo yake tsvene.”
^ Kana kuti “ndichifungisisa.”
^ Kana kuti “Ndicharidzira Jehovha rwiyo.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Chokwadi ndine kutenda kwekuti ndichaona kunaka kwaJehovha munyika yevapenyu.”